Qatar: Manohitra ny politika vaovao mikasika ny fahazoan-dàlana raisina eo am-pahatongavana ireo mpiasa mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2010 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, Français, বাংলা, 繁體中文, English
Mandeha ny tsaho araka ilay vaovao an-gazety tany an-toerana fa mikasa ny hampihatra ny tsy fanomezan-dalana eo ampahatongavana intsony i Qatar ho ana firenena ampolony maromaro.
Araka ny gazety Gulf Times, ny fanovàna, izay mihatra aorian'ny 1 may, dia mitaky ireo firenena eropeanina 33, firenena tandrefana sy ny firenena aziatika mba haka ny ‘visa’ amin'ny alalan'ireo masoivoho Qatari any amin'ny fireneny avy alohan'ny ahatongavana ao Qatar.
Ny masoivohon’i Etazonia, Britanika ary frantsay any Doha dia efa nanamafy fa anisan'ireo firenena niharan’io fanovàna io izy ireo, fa nilaza kosa ireo solontena ofisialy avy amin’ny firenen-kafa fa mbola vao manadihady momba izany ry zareo.
Nilaza i Marjorie ao Qatar:
Ny sasany indray mihevitra fa fomba entin'ny Qatar hiarovana ny sisintaniny iny, vokatr’ilay famonoana ny filohan’i Hamas, Mahmoud al-Mabhouh tamin'ny volana Janoary. Ahiahiana ho novonoina lehilahy maromaro mampiasa pasipaoro sandoka eropeanina sy britanika izy. Manameloka ny sampam-pitsikilovana israelina Mossad i Dubai tamin'izany famonoan'olona izany.
Niteny i ibnkakfa ao amin'ny Twitter:
Ao amin'ny Qatar Living, “forum” malaza amin'ny aterineto , izay nahitana lahatsoratra momba ilay politikam-panovàna nahazo tsikera maherin'ny 100, niteny i Bleu: